Ogaden News Agency (ONA) – Qorshihii Wayaanaha wuu fashilmay, Banaanbaxyo midaysan ayaa ka bilowday Adisababa
Qorshihii Wayaanaha wuu fashilmay, Banaanbaxyo midaysan ayaa ka bilowday Adisababa
Waxaa Jimcihii gilgilay Adisababa banaabax aan horey uga dhicin oo laga soo abaabulay masjidka caanka ku noqday banaabaxyada ee Anwar. Banaabaxyada muslimiinta ay dhigayaan ayaa labadii sanee la soo dhaafay ka socday Adisababa taasoo ay ka dhiidhinayeen fargalinta ay xukuumadda Wayaanaha ku hayso arimaha u gaarka ah diintooda.
Xukuumadda Itobiya qorshaha ay kaga hortagaysay banaabaxyada muslimiinta wuxuu lahaa laba waji. Midka hore in loo tuso shacabka Itobiya gaar ahaan masiixiyiinta inay ka dambeeyaan banaabaxyada kooxo Xagjireen ama waxay ugu yeedheen Jihaadiyiin ah oo dibadda laga soo maalgaliyay. Waxay maxkamad soo taageen dhalinyara la yidhi waa Jihaadiyiin “Jihadawi Harekat”, iyo waliba marwada wasiir ka mid ahaa xisbiga EPRDF oo Oroma ahaa, kaasoo ka soo cararay iskana dhiibayKenya. Ujeedada ay ka lahaayeen waxay ahayd in dadweynaha masiixiyiinta ah aanay ku dayanin muslimiinta ama la soo banaanbixin.
Wajiga 2aad ee qorshaha wuxuu ahaa in gacan bir ah lagu qabto oo marka qaar badan oo culumada iyo imaamyada masaajidda ah xabsiyada loo taxaabo ay iska dagi doonaan.
Qorshahaa way ku fashilmeen Wayaanaha, waxaana hadda gacmaha is-qabsaday shacabka Itobiya ee labadaa diin kala aaminsanaa, gaar ahaan Xisbigan Cusub ee Blue Party markuu soo baxay kuna dhawaaqay banaabax ayay dadweyne boqolaal kun ah oo ka kooban muslim iyo masiixiba ay soo mareen wadooyinka Adisabab si aanay filaynin xukuumadda TPLF/EPRDF.
Qoraalada indheergaradka shacabka ayaa hadda cinwaan u ah –Nalama kala gayn karo – “Anelayayem Egna”, “We are inseparable”. Halku dhigyada banaanbaxayaduna waa -Cadaalad iyo Xoriyad-.
Waxaa halkaa ku burburay qorshihii Wayaanaha eek u dhisnaa Qaybi oo xukun.